Iyiphi igama elingukhiye le-Amazon elisezingeni le-tracker ongayincoma ngalo ama-newbies?
Uma usanda kuhamba emakethe okunokuncintisana nokukhuluma ngokungathembeki njenge-Amazon, uzobhekana nenselelo yangempela. Into yokuthi akuwona umsebenzi olula ukuphumelela ngebhizinisi lakho lokuthumela phansi. Futhi asikho isidingo sokuthi abathengisi bokuqala bazuze amathuba okuba basinde e-Amazon kanye nokufakwa ohlwini kwabo komkhiqizo. Ngokufana nokuncintisana kokuseshwa kwe-cutthroat ku-Google, impumelelo yokuhweba ibhizinisi lokudonsa ihlale inqwaba kusukela echibini elifanele elikhethiwe ngamagama angukhiye asemqoka. Eqinisweni, umqondo we-Search Engine Optimization (SEO) konke okuphathelene nokuqukethwe namagama angukhiye. Khumbula, okuqukethwe kukhona inkosi, akunjalo? Kodwa ngokuqhuba ibhizinisi lokuthumela phansi-Amazon, ukusetha i-tracker toolkit yamagama angukhiye akusasekho ukunethezeka nje ukunikeza inzuzo ethile phezu kwakho emakethe.
Futhi hhayi nje kuphela ama-newbies, kodwa wonke umthengisi wesikhathi eside ku-Amazon usebenzisa amatshina we-tracker asezingeni kanye nesofthiwe yokucwaninga ukuze ahlale ebuyekeziwe futhi aqhubeke eshukumisela isinyathelo esisodwa ngaphambi kwabancintisana abaseduze . Yonke into idinga ukulawulwa okuqondile nokuqhubekayo - kuqala ngokucwaninga kwegama elingukhiye, ukuhlelwa kokufakwa komkhiqizo nokulawulwa kwamanani. Yingakho njengomthengisi we-novice uyanconywa ukuba uqhubeke ngokukhetha ikhiphelo elifanele kunazo zonke le-Amazon usezingeni lensiza ye-tracker, okungenani ube neqalo eliqinile lokuqala. Ngakho-ke, nansi uhlu olufushane lwezinketho eziphezulu ezifakiwe ukuze uthathe isinqumo futhi ekugcineni usethe uhlu lwemikhiqizo oluthengisa ngempela. Ngenhlanhla kunamathuluzi amaningi alula kodwa ayenayo okwamanje afanele ukuzama ngaphambi kwanoma yini enye. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza . Ngenkathi abanye abantu bethi kunakho okunye okukhethwa kukho okuthuthukisiwe, ukusebenza okuzinhloso eziningi yiyona nto eyenza iNonar ibe yinto ekhethiwe yokukhetha yonke i-newbie, njengoba isanda kuqhuma embonini yokuthutha yokudonsa okokuqala.
Ithuluzi elingamagama ayisihluthulelo kungcono okwesibini okukhethwa kukho ukuqala futhi uthole amagama angukhiye afanele ohlwini lwazo lomkhiqizo - ngokushesha futhi kalula. Ngaphezu kwalokho - nge-Pro advanced version etholakalayo kubadlali abaqeqeshiwe kakade, ungazama inguqulo yayo eyisisekelo ye-kickstart, ukuze ishintshwe ekuhlaleni okubanzi okudinga okungenani ukuqonda kwakho okuyisisekelo kwensimu.
Ama-Merchant Words ungumholi ophelele uma kuziwa ekuthuthukiseni inkulumo ethize yegama elingukhiye elide. Okukuphela komkhawulo ukuthi abanye abathengisi be-novice bangabhekana nenkinga yokutholakala ezweni lakubo noma esifundeni.
I-KeywordInspector izoba isinqumo sakho esenziwe kahle uma ufuna uhlu lwakho lwemikhiqizo e-Amazon ukuthi luhlale lukhuphisana njalo, ngoba imali yokukhokha yenyanga engama-dollar angu-40 ayiyona imali ephakeme kakhulu yokuqalisa kwakho.
Isiteji seScientific Seller sichaza ngegama. Kodwa-ke, phawula ukuthi kuyaphawula ngokwanele ukuthatha ihora eligcwele noma ngaphezulu kokusesha kwegama elingukhiye elilodwa. Noma kunjalo, kuyisisombululo esiphezulu kakhulu sokwenza ukuqonda okujulile kwegama elingukhiye usezingeni e-Amazon. Yiqiniso, ngaphandle kokuthi ungazinikele ekusebenziseni amathuluzi okusekela okusheshayo nokuphendulayo.